2021 Durban July – The Ulwazi Programme
Unyaka nonyaka ziyagezelana kwiDurban July okungumuqhudelwano wamahhashi. Lomdlalo wamahhashi uletha izivakashi eziningi eThekwini ngenxa yokuthi usezingeni lomhlaba kanti futhi kusuke kudliwe nengqephu abantu bebahle bedelile. Okwehlukile kulonyaka kuneminyaka eyedlule ukuthi kulokhu ngenxa yesimo seLockdown/COVID-19 abantu abakwazanga ukuthi bezobungaza baphinde bazibonele bukhona amahhashi egijima. Kepha kube khona laba abaqhudelana ngamahhashi nedlanzana nje Labantu. Kodwa ke lokhu akumanga endleleni yokuthi kuqhubeke umuqhudelwano, njengoba uqhubekile endaweni yaseGreyville lapho odlalelwa khona. Kanti ke ihhashi elizidlele amahlanga lahamba phambili kube uKommetieding eliqhutshwa ibhungu laseKapa uAshwin Reynolds. Kube ingqophamlando njengoba kunqobe uReynolds njengoba kungumuntu wokuqala onsundu odle umhlanganiso kulomjaho wamahhashi.
Imiphumela ye-2021 DURBAN JULY ime kanjena ke:
Position Number Horse Odds Jockey Trainer
IDurban July ibaluleke kakhulu emnothweni waseThekwini ngoba phela unyaka nonyaka iletha izivakashi eziletha umnotho kuleli dolobha. Kuthi kunjalo nje iphinde ikhangise ngobuhle beTheku kanye neNingizimu Afrika yonkana nje jikelele. Lomdlalo wamahhashi ubukelwa ngisho abantu bakumazwe angaphandle ngisho nabaphesheya kwezilwandle. Kulo mdlalo kuqhudelwana ngemali yokuthi iliphi ihhashi elizodla umhlanganiso, elizophuma isibili, nezilizophuma isithathu njalonjalo. Umnikazi wehhashi elidla umhlanganiso kulomcintiswano uzihambela ekhaya ngemali eyizigidi ezimbili lokhu okusho khona impela ukuthi zisuke zigezelana, zidlana imilala impela kudingeka ingqwele. Noma sikhala ngenxa yeCOVID-19, kepha sikhala sibuye nganeno ngoba phela kulokhu ube khona lomqhudelwano ngosuku obuhlelwe lona noma zingabanga ke khona izinkumbi zababukele zizozibonela mathupha.
Categories News, Places Tags 2021 Durban July, Umjaho wamahhashi